'बेबी सावर' चलनले गर्भवती महिलालाई फाइदा गर्दैन
आषाढ १५, २०७८ ०८:४७ मा प्रकाशित
एकचोटि हामीलाई पश्चिमको एउटा गाउँमा एक परिवारले ‘विशेष कार्यक्रम छ, आउनुपर्छ’ भनेर आग्रह गर्‍यो । उक्त परिवारलाई हामीले चिनेको दस वर्ष भएको थियो । कठोर मिहिनेत गरेर गरिबीबाट उक्सिन दस जनाको त्यो परिवारमा सबैले योगदान गरेका थिए ।
हामी खुसीसाथ त्यहाँ पुग्यौं । ढोकैमा लेखिएको रहेछ— “बेबी सावर” । के रहेछ यो भनेर गम्दै भित्र पसेपछि हामी छक्क पर्‍यौं ।
(लेखक : डा. अरुणा उप्रेती र नम्रता शर्मा हुनुहुन्छ । )
डा. अरुणा उप्रेती।